Mitemo yePOSA neAIPPA Inombosendekwa Parutivi
Chikumi 21, 2010
Changa chiri chipatapata munzvimbo dzakawanda neMuvhuro apo vanhu vari muchirongwa chekunyorwa kwebumbiro idzva, vanga vachinyoresa uye kuwanirwa nzvimbo dzavanenge vachigara muchirongwa ichi.
Mukurerutsira vanhu muchirongwa ichi, hurumende inonzi yambomisa kushandisa mitemo ye POSA neAIPPA kwemwedzi mitatu inotevera, kuitira kuti kunyorwa kwebumbiro idzva remitemo yenyika kusavhiringidzwa nemapurisa.
Mumwe wemasachigaro ekomiti yeparemende iri kutungamira hurongwa uhu, VaDouglas Mwonzora, vanoti dare remakurukota rakabvuma kutora danho rekuti mitemo iyi imbomiswa. Komiti yaVaMwonzora yaburitsawo mazuva ainenge iri munzvimbo dzakasiyana siyana.
Pasi pechibvumirano chehurumende yemushandira pamwe, Zimbabwe inofanirwa kunyora bumbiro idzva pasati paitwa sarudzo munyika. Kunyorwa kwebumbiro idzva iri kunofanirwa kupedzwa mukati memwedzi gumi nemisere kubva pakagadzwa hurumende yemubatanidzwa.
Kana kunyorwa kwebumbiro iri kwapera, pachaitwa referendamu yekubvunza vanhu kuti vanotambira here kana kuramba kutambira bumbiro iri.
Kana vanhu vakatambira bumbiro iri, rinobva raitwa mutemo, sarudzo dzichibva dzarongwa.